Ndeipi Yakanakisa Inotakurika Tripod yeFoni, DSLR Kamera, GoPro, kana Microphone? | Martech Zone
Ini parizvino ndine zvinhu zvekuteerera zvakawanda zvekuti ndakatenga bhegi rine mavhiri, bhegi rangu renhume raingorema zvakanyanya. Ipo bhegi rangu rakanyatsorongeka, ini ndichiri kuda kudzikisira kurema nekusava nezvakawanda zvemarudzi ese echishandiso kana chishongedzo chandiri kuuya nacho.
Imwe nyaya yaive yeunganidzwa yetripods yandakanga ndakatakura. Ini ndaive nekadiki desktop desktop, imwe yaive inoshanduka, uyezve imwe yaingova yeangu smartphone. Izvo zvese zvaive zvakawandisa. Ini ndinofunga ndakayedza ingangoita ese matatu anotakurika katatu pamusika - kusvika ndaedza iyo UBeesize Tripod X.
Iyo inochinja-chinja katatu inoreruka uye inotakurika asi iine makumbo marefu kupfuura ese andakawana - 12 ″. Yakasimba zvakakwana kukwira yakazara DSLR kamera kana camcorder pa, uye inouya neakawanda zvinhu.
Nhare mbozha Bata Clip ye iPhone / Android Runhare
Muswe unotenderera unokiya munzvimbo
GoPro gomo adapta
Makaralı ari kure kamera bhatani
Makumbo acho ese ari maviri anochinjika uye akaputirwa neinopfavirira yerabha yekumonera isingabvarure kana kutsemuka, asi ichinyatso bata chero chinhu chaungade kuchimisikidza kana kutenderera. Uye, zvedi makumbo akareba zvakakwana kuti anyatso chengetedza kuti isazununguke kana kudonha - kunyangwe iine kamera inorema pairi.
Ndine chikuru Apogee maikorofoni izvo zvandinotakura neni kuti ndiite podcast mumugwagwa, asi mutiraipodhi waisatombove wakareba zvakakwana saka ndaigona kuenzanisa pane mamwe mabhuku - uye yaiwanzo tsvedza nekutsvedza nemakumbo epurasitiki emakumbo. Iyi tripod haibudike uye inondibvumidza kuti maikorofoni imiswe panzvimbo pandinoida. Uye sezvo iwo akatemerwa kutenderedza madhora makumi maviri, ini ndakatenga mashoma - epamba, hofisi, uye bhegi.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu Amazon yakabatana chinongedzo munyaya ino.
Tags: camcorder katatukamera yedhijitaridigital kamera katatudslrDSLR Kameradslr katatuanochinjika mutiraipodhiGoProgopro katatuIphone tripodMicrophonemaikorofoni kataturunhareinotakurika katatusmartphone katatutripodubeesize katatukuputira katatu
Dzvanya-ku-Kufona Chave Chakakosha kune Yemunharaunda Kutsvaga Kushambadzira Kubudirira